5 zvikonzero zvekudzidza iyo Degree muSocial Dzidzo | Kuumbwa uye kudzidza
5 zvikonzero zvekudzidza iyo Degree muSocial Dzidzo
Maite Nicuesa | 18/05/2021 08:00 | Kudzidziswa
El wemagariro mudzidzisi Iye inyanzvi inoita basa rakakosha kwazvo mumataundi nemaguta. Vanhu vese vakakosha uye kusangana kwevamwe kunosimbisa zvakajairika zvakanaka. Zvisinei, kune mamwe mapoka ayo ari panjodzi yekutambura imwe mhando yekusaonekwa padanho rezvemagariro. Munzanga yanhasi, semuenzaniso, vanhu vakura vanosangana nezera rinoratidza kufungira zvisizvo izvo zvinopa mufananidzo wechokwadi wevakura.
Mudzidzisi anotora chikamu muzvirongwa zvinokurudzira kusimukira kwevanhu kuburikidza nehunhu. Zviito zvakaitwa zvinogona kuverengerwa mukati mechikamu che hudiki, kuyaruka, hudiki kana kuchembera. Iwe unogona zvakare kutsigira mamwe anotambura mapoka. Nei uchifanira kudzidza iyo Degree muSocial Dzidzo? MuKurovedza uye Zvidzidzo tinokupa mamwe mazano.
1 1. Iva mumiriri wekuchinja
2 2. Values
3 3. Kuvandudza hupenyu hwevanhu
4 4. Kugara uchidzidza
5 5. Matanho ekudzivirira
1. Iva mumiriri wekuchinja
Kusimudzira shanduko dzakadzama munharaunda, zvakakosha kusimudzira hutungamiriri muzvirongwa zvinotevera chinangwa ichi. Asi shanduko yemaitiro aya haisi mhedzisiro yemukana, asi inozvarwa nekuronga. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti ugadzirire kuongororwa kwenzvimbo iripo kuti ufambe munzira yaunoda. Mudzidzisi wezvemagariro evanhu ane dzidziso inodiwa kuti atore mukana wezano rekuchinja.
Kune mbiru dzakakosha kusimudzira mufaro sekunakirwa munharaunda. Maitiro ndiyo misimboti inovandudza kugarisana uye inosimbisa kutaurirana. Asi, panguva imwecheteyo, zvakakoshawo kuti kune nyanzvi dzinodzidzisa vamwe mukukosha kwemaitiro ayo, dzimwe nguva, anogona kuve anoenderana. Hunhu hunodzivirira kodzero dzevanhu hwakakosha.
3. Kuvandudza hupenyu hwevanhu
Mudzidzisi wezvemagariro anoona kuti, kuburikidza nebasa reboka rakasarudzika, shanduko inoitika muhupenyu hwevanhu vanowana zviwanikwa zvitsva. Shanduko haisi yekukurumidza asi pane maitiro ehurongwa. Rubatsiro urwu harusimudzi kutsamira asi asi kuzvitonga nekupa simba kwevanhu kuti, kuva nekugadzirira kuri nani, kutarisana nematambudziko ezuva nezuva nematurusi matsva.
Munhu wega wega akasarudzika uye akasiyana, nokudaro, izvi zvakasiyana zvinowedzera hunyanzvi maitiro evaya vanoona kuti zuva rega rega rakasiyana neyaimboitika. Rwendo rwemudzidzisi wezvemagariro haruna kufanana, nekuti maitiro uye mamiriro acho akanyanya.
4. Kugara uchidzidza
Mudzidzisi wezvemagariro anobatsira vamwe asi, panguva imwechete, anogara achidzidza kubva mukubata nenyaya dzinomuratidza chokwadi chakaoma. Mudzidzisi wezvemagariro anodzidza kubva kune wega-yekuvandudza kugona kweavo vaanoperekedza uye vatungamiriri.
Havasi vanhu vese vane mamiriro akanaka, asi vese vanofanirwa kufara. Uye zvinodikanwa kuti uwane nzira inoita kuti maitiro aya agone. Dzidzo yemagariro inopa mhinduro kumibvunzo ine kukosha kwouzivi.
5. Matanho ekudzivirira
Mudzidzisi wezvemagariro inyanzvi inopindira kana mamiriro ekukuvara achiitika. Nekubata kwake anoita kuti chimiro chisarambe chiri mundege yekusaonekwa: anopa izwi kumamiriro ezvinhu anoda mhinduro yakanangana nezvinodiwa chaizvo. Asi mudzidzisi wezvemagariro haashande zvine mutsindo, asi achiteedzera. Nenzira iyi, zvakare inotora chikamu muzvirongwa zvekudzivirira zvine chinangwa chekusimbisa hutano pamwe. Nenzira iyi, zvinokwanisika kudzivirira kubviswa kunogoneka kwemamwe mapoka ari panjodzi huru yekutambura nemamiriro ezvinhu aya nechikonzero chakati.
Basa remudzidzisi wezvemagariro rakakosha kwazvo munharaunda yanhasi iri kuenda panguva yekuchinja nedambudziko. Pasina kupokana, iri basa repamusorosoro rine hurefu hwevanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Kudzidziswa » 5 zvikonzero zvekudzidza iyo Degree muSocial Dzidzo
Maitiro ekupasa bvunzo usina kudzidza?